Sidee loogu kala guuleystay abaal-marinta xiddiga sanadka Premier League ee PFA tan iyo markii bixinteeda la bilaabay? – Gool FM
(London) 29 Abriil 2019. Virgil van Dijk ayaa loo caleemo saaray xiddiga sanadka Premier League ee PFA xafladdii Glitzy awards ee xalay ka dhacday Magaalada London ee caasimadda Waddanka Ingiriiska.
Waa markii ugu horreysay tan iyo xilli ciyaareedkii 2004-2005 oo uu laacibka sanadka ku guuleysto xiddig ka ciyaara daafaca, markaasna waxaa ku guuleystay kabtankii hore ahna difaacii hore ee Chelsea John Terry.
Waa sanadkii labaad oo xiriir ah oo abaal-marintan la geynayo garoonka kooxda Liverpool ee Anfield maxaa yeelay kal ciyaareedkii hore ee 2017-18 waxaa ku guuleystay Mohamed Salah, halka xilli ciyaareedkan uu qaatay Van Dijk.
Ciyaaryahankii ugu horreeyey ee abaal-marintan ku guuleysta waxa uu ahaa Norman Hunter oo qaaday isagoo ka tirsan kooxda Leeds United.
Haddaba waxaan halkaan hoose ku eegeynaa sida abaal-marintan loogu kala guuleystay tan iyo markii bixinteeda la bilaabay xilli ciyaareedkii 1973-74:-
sidoo kale qaaday
2016–17 N’Golo Kanté Chelsea FWA